Litecoin waa - Blockchain News
Litecoin (LTC) waxaa la abuuray by Charlie Lee, a shaqaale hore ee Google iyo Ex-Director of Engineering at Coinbase. Litecoin waa fargeeto ah oo ka mid ah macmiilka Seeraar Core oo la sii daayay via macmiilka-il furan ah oo ku saabsan GitHub. Litecoin la sii daayay bishii October 2011. Waayo, waqti dheer ah, ay ahayd cryptocurrency labaad by cap suuqa. Taasi waa sababta dadka u bixiyey “lacag digital.” Waqtigan xaadirka ah, Litecoin yimaado lixaad, guuldarro Seeraar, Ethereum, udhaqaajiyaa, Seeraar Cash iyo Cardano. cap suuqa waa $8.383.386.336, iyo 1 LTC uyeelaysaan 0,01799050 BTC, ama $152,24. Muddo sannad 2017, qiimaha ayaa rocketed by 1,250%.
network Litecoin ayaa la qorsheeyay in ay soo saaraan 84 million litecoins, taas oo afar jeer sida unugyada lacagta badan sida Seeraar. Sida Seeraar, Litecoin waxaa miino. Mid ka mid ah sidoo kale waxay keeni kartaa in ay u ganay keli ah ama ku biiro Cloud Macdanta a waxaan ku talin karaa oo keliya, kuwaas oo 3 shirkadaha Hashflare, IQMining ama Genesis Macdanta. Si ka duwan Seeraar ay SHA256, Litecoin shaqeeya version la fududeeyey of scrypt sida ay isku geynta caddayn-of-shaqada ahato. Its qaab tiirsan on helaan si xaddi weyn oo xusuusta.
Dad badan ayaa inta badan is barbar Seeraar oo dahabka, oo wuxuu ku yidhi waxa an option maalgashiga ku fiican. Well ka dibna, Litecoin laga daawan karo lacag-a dhexdhexaad ah sarrifka la shaqeynayaan loo baahan yahay. qiyaas ahaan waqtiga jiilka block Litecoin waa 2.5 daqiiqo oo ay kasoo horjeeddo 10 daqiiqo Seeraar, taas oo macnaheedu yahay xawaalad dheeraad ah waqtiyada xaqiijin dhakhso.
Waxaa intaa dheer, Litecoin ayaa firfircoonaan takooran Witness (raacay) oo la geeyay hillaac Networks (lihida), taas oo si weyn u soo hagaagtay awoodda network ee. Iyo technology ugu bedelato Atoomikada awood Litecoin in si toos ah loogu bedeshey Seeraar, Ethereum, Vertcoin, iyo Decred-blockchains in sidoo kale isticmaali bedelashada qaaradda.
All teknoolajiyada kor ku xusan oo markii ugu horraysay soo bandhigay oo la tijaabiyey in network Litecoin ah. Kooxdu waxa ay si joogto ah isku dayaya in ay ka dhigaan wax soo saarka ay ka fiican. Litecoin waa dhakhso badan oo dabacsan badan Seeraar, kaas oo u ogolaanaya waayo, taasu in ay isku dayaan fikradaha cusub oo tijaabo iyaga la dhabta deg deg ah.
From aragtideyda, Litecoin ee waaweyn-iyo-ugu daran tartan aan Seeraar laakiin Zcash. Waxaa dul maamuuska Zerocash ka bixiya xawaalad gaarka ah-Dhawrista dhisay. Waa in magaciisa la sameeyey Edward Snowden ka soo baxay in taageero cryptocurrency ah, yeeray “kale Seeraar ugu xiisaha badan.”
Oo dhinaca farsamada, Litecoin leeyahay oo dhan fursado ah si ay u noqdaan cryptocurrency ugu fiican ee tafaariiqda transactions.There ee jid uma Litecoin outplay yaabaa Seeraar eego caan. Laakiin sida warshadaha cryptocurrency ku bislaadaa, lacagaha digital yar awoodaan in ay aqoonsi helaan ay noqon doontaa.
Twitter by SatoshiLite
SEC doonaya comments f ...
Price Xiddigle: Great ...
Seeraarblock silsiladdaruur macdantacryptocurrencylitecoinmacdantanetwork
Post Previous:The PHANTOM maamuuska cusub hillaac Network tartami doona
Post Next:deVere Group oo bilaabay app ganacsiga cryptocurrency